FAQs - Shanghai Pamaens Technology Co., Ltd
Ukonga amandla, qala apha
Support email beth@pamaens.com
Inkxaso Call +86 021-34125536
Zokuvala Jacket for Band wesiFudumezi (wesiFudumezi Jacket)
Zokuvala Jacket for zomlilo kunye Tank Reactor
Zokuvala Jacket for Valve & Imibhobho & esisangqa
Iibhatyi zokuvala ngentando
Energy Saving wesiFudumezi
Energy Saving Nano wesiFudumezi
Energy Saving Induction wesiFudumezi
Drum Tank heater
Elungiselelweyo ukufudumeza jacket / kwengubo
Abicah rubber heater
Abicah heater ne Bukanqinishe
Ceramic Band Heate
LinguMika Band wesiFudumezi
Yenzani Band wesiFudumezi
Siphose aluminium band heater
Siphose ubhedu band heater
Ukufudumeza & olupholisa System
LinguMika Ubushushu Plate
Ceramic zokufudumeza plate
Siphose kufudumeze plate
Carbon Fiber wesiFudumezi
WesiFudumezi lefoni yodongwe
Industrial heater blower
J uhlobo thermocouple
K uhlobo Thermocouple
uhlobo Pin thermocouple
Yintoni intengo yakho?
Uninzi iimveliso zethu iimveliso esingabizi, ngoko amanani kuxhomekeka parameter ethile. Kodwa nindisize ubungqina uluhlu lwamaxabiso ngokukhawuleza ukufumana imibuzo yakho.
Ewe, udeske uyilo lwakho olukhulu zibe ziimveliso ogqibeleleyo thina; Kakade ke, uyilo lwakho okhethekileyo uya kuba iyimfihlo enkulu. Ngelo xesha, umyili elungileyo thina.
Ewe, sibe CE zokucupha kunye CE isiqinisekiso uninzi iimveliso zethu kunye RoHs ukuba ezinye iimveliso. Amanye amaxwebhu kumazwe afana-inshorensi; Imvelaphi ayikwazanga kubonelelwa xa isicelo sakho.
Kuba iisampuli, ixesha yipeyinti malunga 7 iintsuku. Kuba production mass, ixesha phambili ziintsuku 15-20 emva kokufumana intlawulo. Amaxesha akhokelayo kusebenza xa (1) siye safumana idipozithi yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela imveliso yakho. Ukuba maxesha ethu ukhokelo azisebenzi nge umhla yakho, nceda uye phezu iimfuno zakho ukuthengisa yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukubonelela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi akwazi ukwenza loo nto.
Njengoko uninzi iimveliso zethu zenzelwe, siya ukhetha 100% yentlawulo kwangaphambili kodwa kufuneka kuxoxwe kuxhomekeke umyalelo value.We ukwamkela T / T, PayPal, union entshona, kunye Alibaba isiqinisekiso yorhwebo intlawulo.
Omnye ukuya kwiminyaka emibini ngokuxhomekeke kwiindidi mveliso.
Le thempleyithi yenzelwe zinendawo micro for iindidi zamashishini, oko kukuthi Petro - Industrial HTML isifanekiso. kwakukho agqithisile le template usebenzisa HTML / CSS.
20,09,19June 16, 2017
Hot Runner PET Bottle Preform Mold
05,07,19June 16, 2017
Air cooled ceramic band heater for extrus...
14,03,19June 16, 2017
Removable and Reusable Insulation Jackets...
01,12,18June 16, 2017
© Copyright - 2018: All Rights Reserved.